Fanangonan-tsonia ho famotsorana an’i Hao Wu, tonian-dahatsoratry Global Voices, alefa any amin’ny filoha Hu Jintao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2018 0:14 GMT
Maro ireo mpamaky ny Global Voices no nanontany izay azon'izy ireo atao mba hanafainganana ny famotsorana ny namantsika sady mpiara-miasa amintsika Hao Wu gadraina ao Beijing. An-jatony aminareo no nametraka famantarana ao amin'ny bilaoginareo sy tranonkalareo mba hisarika ny saina manoloana ny fanagadrana an'i Hao Wu, ary nanampy tamin'ny fahalianan'ny fampahalalam-baovao mikasika ny toe-draharaha izany fanohanana izany.
Nanantena izahay fa ny teritery ataon'ny media dia hitarika an'i Hu Jintao hamotsotra an'i Hao mialoha ny fihaonany manaraka amin'ny Filoha Bush. Saingy indrisy fa toa tsy hitranga izany. Noho izany dia nanomboka fanentanana fanoratana taratasy sy fanangonan-tsonia izahay androany mba hangataka ny famotsorana an'i Hao tsy misy hatak'andro.
Nanomboka ny fanentanana fanoratana taratasy i Rebecca androany maraina, ary nandrisika ny mpamaky mba hanoratra any amin'ny governemantam-pirenen'izy ireo, any amin'ireo ambasadaoro Shinoa any amin'ny firenen'izy ireo, any amin'ny gazetin'izy ireo any an-toerana, ary ny filoha Shinoa Hu Jintao. Manome sombiù-baovao lehibe hampidirina ao amin'ny taratasy na lahatsoratra, ary koa adiresy ilaina ny lahatsorany.
Nanatontosa fanangonan-tsonia an-tserasera ihany koa izahay, mangataka amin'ny filoha Hu Jintao mba hamotsotra tsy misy hatak'andro an'i Hao.
Ny lahatsoratra ao amin'ny fanangonan-tsonia dia mivaky hoe:
Izahay, manoratra, olom-pirenena manerantany voakasika dia manohitra ny fanagadrana tsy misy fiampangàna an'ilay mpamokatra horonantsary sady bilaogera Shinoa Wu Hao ary miantso ny governemanta Shinoa hamotsotra azy tsy misy hatak'andro.
Niverina nody tany Shina ary namokatra horonantsary fanadihadiana tsy miankina Atoa Wu, teratany Shinoa sy nonina ela tany Etazonia fantatra amin'ny anarana hoe “Hao Wu” any Etazonia. Nogadraina izy tamin'ny 22 febroary kanefa tsy nampangaina ho nanao heloka bevava. Tsy nanome fanazavana mikasika ny fanagadrana azy tany amin'ny fianakavian'i Wu Hao ny manam-pahefana na dia maro aza ireo fanadihadiana natao. Araka ny voalazan'ny Fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao Shina, dia tsy azo atao ny managadra olona tsy misy fiampangana na misambotra mandritra ny 37 andro. Efa nihoatra lavitra io fe-potoana io ny fihazonana azy.
Raha ny fahafantaranay mifototra amin'ireo kabarin'ny mpitondra ao Shina, mikasa ho firenena tan-dalàna i Shina. Toa tsy mifanaraka tanteraka amin'izany tanjona izany anefa ny fisamborana an'Atoa Wu tsy misy fiampangàna, sy ny tsy famelana azy hanana mpisolovava.
Raha nandika lalàna tokoa Atoa Wu, tokony hanohana ny zon'i Wu hanana dingana ara-pitsarana ara-dalàna ny firenena izay manaja ny fitsipi-dalàna. Ny fanagadrana azy tsy ara-dalàna dia fanitsakitsahana mazava ny zony maha-olombelona nekena manerantany. Mangataka ny famotsorana azy avy hatrany izahay.
Mangataka izay rehetra mamaky ity lahatsoratra ity izahay azafady mba hanasonia ny fanangonan-tsonia ary hampita ny rohy (URL) any amin'ny namana izay mety hanasonia izany koa. Ilaina ny adiresy mailakao raha hanasonia ny fangatahana, saingy tsy havoaka izany. Raha afaka mandika teny ny fangatahana amin'ny fiteny hafa ianao, azafady ampahafantaro anay izany – tianay ho hita amin'ny fiteny maro araka izay azo atao ny fangatahana.
Misaotra amin'ny fanohananao ary misaotra miahy ny namantsika.